Ukusweleka ngokuBambisa iziyobisi kufikelele kuMgangatho omtsha: 100,000 kunyaka ophelileyo e-US
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukusweleka ngokuBambisa iziyobisi kufikelele kuMgangatho omtsha: 100,000 kunyaka ophelileyo e-US
Ngokutsho kwedatha entsha ngamaZiko oLawulo lweZifo, ukufa kweziyobisi e-United States kudlule i-100,000 kwisithuba seenyanga ezili-12 okokuqala. Inani lokufa kwe-overdose lenyuke ngama-29% kulo nyaka uphelileyo. Idatha ithathwa njengeyethutyana kodwa ixela kwangaphambili ukuba kuya kubonisa ntoni na amanani okugqibela.
Iingcali zicinga ukuba ubhubhane udlale indima ekonyukeni kokusetyenziswa kakubi kweziyobisi kunye nokufa, kodwa ukuza kuthi ga ngoku, akukho bungqina bubambekayo. Zithini iingcali, nangona kunjalo, kukuba imfundo yasekuqaleni kunye nokuthintela ngundoqo ekubuyiseleni umva.
Ixesha elilodwa lokuthintela
ICandor, ebonelela ngemfundo yempilo yeziyobisi kunye nesondo kubafundi abakwibanga lesi-4 ukuya kwele-8, iye yawandisa umxholo wayo wokufundisa ngeziyobisi kubantwana nakubazali. Ikharityhulamu yayo 'yeNzululwazi eNgemva kweZiyobisi' iyaqhubekeka ukuvela ukuze ijongane neendlela zokusetyenziswa kweziyobisi nokusetyenziswa kakubi. UCandor ukholelwa ukuba ukubandakanya abazali kwiingxoxo kunye nabantwana babo malunga neziyobisi kunye nempilo yesondo kukhokelela kukhetho olunempilo.
• Yiba ngongenekayo kwaye uqalise incoko – Ukuthetha emotweni kunokuba yindawo ekhululekile yokuthetha – kwaye ukuthetha ngayo kanye akwanelanga.
• Sebenzisa amabali eendaba ukuqalisa iincoko – Xa into enxulumene nokusetyenziswa kweziyobisi ngokugqithisileyo isezindabeni, yisebenzise ukuqalisa incoko.
• Yabelana ngeenqobo zakho kunye nokulindela-Isizathu #1 sokuba abantwana bathi abasebenzisi utywala kunye nezinye iziyobisi kungenxa yokuba abazali babo baya kudana.
• Misela imigaqo ecacileyo – Ukumisela imithetho ecacileyo nengqalileyo sisiseko somgudu wabazali ekuthinteleni. Yenza imigaqo kunye nomntwana wakho kwaye uyinyanzelise ngokungaguqukiyo.
• Gcina umkhondo wamayeza - Kubalulekile ukulahla ngokufanelekileyo amayeza ngexesha elifanelekileyo.
• Yakha ubudlelwane bomzali/nomntwana – Yitya kunye xa unako kwaye ususe izinto zombane ekutyeni, kumagumbi okulala nakwizinto ezenziwa yintsapho. Yiba nomdla kwizinto anomdla kuzo umntwana wakho.
• Bazi abahlobo babo - Nika ingqalelo ukuba umntwana wakho uhleli nabani kwaye uthathe ithuba lokuzazisa kubazali bakhe. Yiba yindlela yabo yokuphuma.
• Yazisa umntwana wakho ukuba angakufowunela nanini na ukuba uze kumthatha okanye xa ukwimeko yoxinzelelo loontanga. Bangasoloko bekusebenzisa njengesizathu sokuthethelela.